Motion Capture na MOCAP, lakilen'ny hetsika tena izy | Famoronana an-tserasera
El MOCAP na fantatra koa amin'ny hoe fivezivezena, Izy io dia dingana iray izay anoratana an-tsary ny hetsika iray izay atao mivantana ary ahafahantsika mamelabelatra a Fialam-boly 3d miaraka amin'ny hetsika hoy izy.
Ny fanadihadiana voalohany izay natao dia nifototra tamin'ny teknolojia mihetsika, ireo dia namboarin'ilay mpaka sary malaza anglisy Edward mybrigde, nandritra ny taonjato faha-XNUMX, taloha kelin'ny nisehoan'ny sarimihetsika. Ireo fandalinana ireo dia nampiasaina nandritra ny taona maro ho karazana fototra hahatakarana ny inona fivezivezena mahazatra ny biby sy ny olombelona.
Ilay malaza Edward mybrigde, nanao fandalinana sary be dia be sy sarotra tamin'ny hetsika, fa ny iray amin'ireo fantatra indrindra dia ilay notontosaina tamin'ny taona 1887, izay mampiseho lehilahy miboridana manao ny fihetsehana amin'ny fikapohana baolina amin'ny ramanavy amin'ny baseball.
Taty aoriana sy tamin'ny 1937, Walt Disney dia nanomboka nanao andrana miaraka amin'ity karazana teknika ity, mba hanatanterahana ny lazany sary mihetsika Snow White, satria ity asa ity dia namboarina tamin'ny teknikan'ny rotoscopy, izay noforonin'i Max Fleisher tamin'ny taona lasa.
Taty aoriana sy rahoviana Sarimiaina 3d niditra tao amin'ny indostrian'ny fialamboly, nanomboka nitady teknika hisamborana ny hetsiky ny olombelona amin'ny fomba famoronana sy malefaka kokoa izy ireo, marihana izany tsy voafetra ho an'ny sehatry ny sarimiaina fotsiny ity fampiasana ity, fa io koa dia nampiasaina teo amin'ny sehatry ny fitsaboana mba handinihana aretina lehibe sasany ary hijerena ireo ratra.
Toy izany koa NASA, amin'izao fotoana izao ampiasao ny MOCAP hamoronana akanjo sy akanjo manokana ho an'ireo dia ireo.
Mikasika ny sinema sy sary mihetsika dia afaka milaza isika fa amin'ny 2002, ilay horonantsary malaza Ny Tompon'ny peratra, nahavita nanangana a mialoha sy aorin'ny resaka teknolojia fisamborana mihetsika, ilay orinasa nikarakara an'io sy namolavola azy dia Weta digital, izay lasa sary masina manerantany.
Tokony ho fantatsika fa noho izany rehetra izany dia tsy mijanona ny indostrian'ny sarimihetsika, misaotra teknolojia izay matetika miseho tsy tapaka ary ny endri-tsoratra vita 3D dia afaka manao fihetsiketsehana tena izy.
Ohatra, ao Gollum dia azo atao ny mankasitraka ny fivoaran'ny evolisiona azo rehefa nandeha ny fotoana, izany dia nanomboka tamin'ny fisehoana voalohany tamin'ny 2003 ka hatramin'ny taona vitsivitsy taty aoriana, tamin'ny 2013 The Hobbit saga. Nahazo realisme be ity toetra amam-panahy ity saingy tokony hamafisinay fa amin'ny hetsika natao tao amin'ny Gollum voalohany dia ahitanao ny sary mihetsika nentim-paharazana sy ny fisamborana hetsika.
Saingy tsy ny orinasa rehetra natokana ho an'ny sarimiaina no mazàna misambotra hetsika, satria ohatra sy amin'ny tranga Pixar, matetika tsy dia ampiasainy izy ireo ary azo atao ny mankasitraka fa ny sarimihetsika rehetra dia mifototra amin'ny tena sarimiaina.
Raha ny tontolon'ny lalao video, Ny MOCAP dia niseho tamin'ny 1995 miaraka amin'ny famoronana ny lalao Soul edgeAmin'ny ankabeazan'ny lalao, Motion Capture, ity teknolojia ity dia matetika ampiasaina hitadiavana zava-misy bebe kokoa, satria ny fihetsika ataon'ny mpilalao dia mitovy amin'ny nataon'ny olombelona.
Raha tokony ho izy sy amin'ny lalao Wii dia ampiasaina hifaneraserana amin'ny lalao izy ireo, izay misy fakan-tsary maro mifandraika amin'ny solosaina manana rindrambaiko manokana. Ireo marika manokana dia natao mba ho fantatra mora miaraka amin'ilay rindrambaiko ary ireo marika ireo dia jiro kely kely izay misongadina ao aoriana.
Toy izany koa, misy rafitra misambotra izay ampiasaina hanarahana fa tsy mila mampiasa marika na karazana palitao manokana. Animatera sy mpamorona lalao afaka misambotra ny hetsika amin'ny fotoana fohy sy amin'ny vidiny ambany, mifototra amin'ny fampiharana ny algorithma sasany izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Motion Capture na MOCAP, lakilen'ny hetsika tena misy
Antonio Gonzales Garcia dia hoy izy:
Izaho dia Antonio Gonzales García. ary miombon-kevitra amin'i Jorge Neira aho. Eny, izaho koa dia mpanao mari-trano momba ny asa fanorenana, teknisianina momba ny asa ary ny asa sivily, ary hoy izy, »Design Lover» hatramin'ny fahazazako.
Fiarahabana avy any Lima, Peroa. George.
Valiny tamin'i Antonio Gonzales García